Aviation mpanara-maso ny Job Description / Adidy Template Ary asa - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Aviation mpanara-maso ny Job Description / Adidy Template Ary asa
Aviation mpanara-maso ny Job Description / Adidy Template Ary asa
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 524 Views
Diniho rivotra azy teny an fanampiana, fomba fiarovana, fiaramanidina, mifehy ny fifamoivoizana an'habakabaka, ary mailaka vokatra mba hanao conformance sasany mampiasa fiarovana Federal lalàna.
Diniho ny asa ny fiaramanidina mihetsika manome fikojakojana, fiovana, na hanamboarana sy manavao ny fiaramanidina sy ny fiaramanidina mekanika rafitra mba ho azo antoka ny fankatoavana fepetra sy ny teknika.
Fianarana fiaramanidina entina Discs sy ny fahafahana ho an'ny fiarovana.
Nahazo zavatra izay hadihadiana, kodiarana, ary ny mpifanandrina ny fuselage, elatra, ary milina momba ny maha zava-dehibe ny fanamboarana ary koa ny porofo fahavoazana na ny fahasimban'ny.
Miomana ary feno foana hanohy indray, fanaraha-maso, fianarana, sy ny taratasy fanamarinana antontan-taratasy sy ny tantara.
Diniho vaovao, raikitra, na ny farany fiaramanidina mba hamantatra fandringanana na kilema koa handinika airworthiness sy conformance ny fitsipika, mampiasa checklists, -tanana fitaovana, sy ny fitaovana fandinihan.
Fakafakao miasa eo antontan-taratasy sy ny fiaramanidina hazo mba hamaritana raha toa overhauls sy ny fanampiana ary ny fikojakojana fanombanana dia natao tao ny voalaza durations.
Atombohy mahita sy fiaramanidina fepetra endri-javatra, ary koa ny fitaovana hafa fitaovana mba hahita porofo ho levona mandrakizay.
Recommend mpisolo toerana, manamboatra, na ny customization ny fiaramanidina fitaovana.
Mpiaro ny fiovana eo amin'ny toro lalana, politika, andrasan'ny, sy fitsipika, mifototra amin'ny fahatakarana ny toe-javatra miasa, fiaramanidina fivoaran-draharaha, ary ny lafin-javatra hafa.
Diniho ny toe-javatra nitranga rivotra sy ny olana mba hahita antony.
Diniho dia tapaka ny mpanamory mba hanombantombana manidina fahalalana sy mba ho azo antoka ny fiarovana sy ny conformance dia famerana.
Manao sidina fitsapana fandaharana mba hanamarinana fitaovana vokatra, ary ny fandaharana fomba isan-karazany eo ambany olana, nampiasa na mandeha ho azy sy ny boky famohana.
Manaiky na tsy famoahana.
Hanombanana ny fanabeazana sy ny fampiharana ny fitondran-tena sy am-bava nivoaka fitsapana mba ho azo antoka ny fahaizana ny olona miasa, nampiany, ary manamboatra fitaovana fiaramanidina.
Agenda ary synchronize in-fiaramanidina rehefa notsapaina ny fandaharan'asa amin'ny tany Crews sy ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka-mba ho azo antoka ny fitaovana fahazoana mijery, rihana ampy, ary mifandray mpamatsy.
Mikatsaka Career fahaizana
Ny fahafantarana ny mamaky Fahalalana-fehintsoratra sy ho vonona amin'ny asa fehezanteny-taratasy mifandraika.
Active-mihaino-Inona hafa milaza nanome saina rehetra, mampiasa ny fotoanany sy ny heriny mba hahatakatra ny hevitra namoronana, manontany tena fanontaniana mety, fa tsy amin'ny toe-javatra fanotofana izay dratsy.
Soratra Masina-ny mpanoratra tsy mba toy ny tsy mety midina ny zavatra ilain'ny fifandraisany mahomby ny mpijery,.
Fifandraisana Miteny amin'ny hafa mba milaza ny vaovao amin'ny fomba mahomby.
Rafitrisa-fampiharana matematika mba hamahana olana.
Science-fampiasana vahaolana ny siansa sy ny fitsipika mba hanarenana olana.
Criticalthinking-Mampiasa fitsarana sy Fandresen-dahatra mba hamantatra ny fahalemena sy ny hery ny mpisolo safidy, hanatsoaka hevitra na fomba ny olana.
Active--Fahatakarana ny Fianarana ny fanazavana vaovao momba ny vokany farany indrindra sy ny ho avy na olana-hamaha fanapahan-kevitra sy ny.
Fianarana Fomba-trainingANDinstructional Mampiasa tetikady sy ny fifidianana sy ny fitsaboana mendrika ny toe-draharaha, rehefa mahafehy na fampianarana vaovao hevitra.
Fanaraha-maso-OverseeingORExamining fahombiazana ny orinasa, hafa ry namana, na tena mandray dingana fanitsiana na mamokatra fivoaran-draharaha.
Social fidirana-Ny hoe mahalala othersA fanehoan-kevitra rehefa ny antony araka ny ataony sy tena azony.
Dexterity-manova fihetsika amin'ny resaka hafa’ dingana.
Salesmanship-Mandresy lahatra ny hafa mba hanova ny loha na ny fitondran-tena.
Fanelanelanana-Mitondra ny hafa miaraka sy mitady ny hampihavana fahasamihafana.
Fampiofanana ny hafa-mampianatra ny fomba handray andraikitra.
Company Orientation-tsara mitady fomba hanohanana olona.
Famahana Olana-Advanced-Famantarana ny olana sarotra sy nandinika tahirin-kevitra izay mifandray amin'ny hanangana sy handinika sy hampihatra safidy safidy.
Rehefa mandinika raharaham-barotra Analysis-maniry sy ny entana fepetra arahana mba hamokarana ny famolavolana.
Injeniera Design-Mamorona na manana fitaovana sy ny injeniera ny faniriany hanome tsirairay.
Gear Selection-mamaritra fitaovana sy ny fitaovana ilaina ny karazana zava-dehibe mba hamono ny asa.
Fametrahana-Manampy fitaovana, entana, cabling, na ny fangatahana mba hihaona endri-javatra amin'ny ankapobeny.
Programming mpamokatra solosaina fampiharana momba ny asa maro.
Operation Tracking-Topy Maso Eran fanadinana, dials, na soritr'aretina hafa mba ho azo antoka misy fitaovana miasa araka ny tokony ho.
Ny asa sy hitantana-Fehezo asan'ny fitaovana na fitaovana.
Maintenance-manao izay fahazarana miasa eo amin'ny fitaovana sy ny mamantatra raha ary inona no karazana fikojakojana ilaina.
Fanamboarana-Famantarana antony ao ambadiky ny fahadisoana izay mihazakazaka sy ny fanapahany hevitra ny lalana ho any momba izany.
Manamboatra-fanamboarana fitaovana na modely mampiasa ny fitaovana izay tena ilaina.
Quality Control Analysis-tsainy-fahavitana fanombanana sy ny fanombanana ny vokatra, orinasa, na ny asa mba hijerena fahombiazana na ny kalitao.
Fitsarana sy ny fanapahan-kevitra-mieritreritra momba ny tombontsoa sy ny fandaniana ankapobeny ny fitondran-tena azo inoana fa hifidy ny tsara indrindra iray.
Systems Analysis-mamaritra ny fomba iray tokony miasa teknika sy marina ny fomba fanatsarana ny toe-piainana, asa, ary ny tontolo iainana ho fiantraikany vokatry.
Systems Evaluation-Ilana famantaranandro fomba na ny famantarana ny fampisehoana, ary koa ny marina na ny asa ilaina mba hanatsarana ny fahaiza-miasa mahomby, araka ny tanjona ny fitaovana.
Timemanagement-fitantanana ny fotoana hafa miaraka amin'ny fotoana manokana oneis.
Fitantanana ny Vola-karama no mamaritra ny fomba azo antoka fa ho lany ho manao ny asa vita, ary ny ampamoaka momba ireo sarany.
Asa ny Material Resources-fikarohana sy miaina ny mety fampiasana ny foto-drafitrasa, Fitaovana, ary ny vokatra tokony ho zava-dehibe ny manao asa voafantina.
Fitantanana ny Mpiasa Resources-Hahazo, mampahery, ary mitarika ny olona satria miasa, manavaka ny olona ambony ho an'ny asa.
Education fahaizana Knowledge Mila
High School Degree (na GED na Senior School Equivalence Certificates)
Ny vola Link (na roa-taona vola)
Over 2 taona, manodidina ary anisan'izany ny taona maro
Asa Authority Skills Mila
faharetana – 88.91%
antony manosika – 89.31%
Leadership – 76.80%
Manahy ny hafa – 91.03%
Fahafehezan-tena – 89.80%
Pressure Tolerance – 84.00%
Javatra iray / javatra iray – 80.00%
azo itokisana – 94.33%
Fanentanana ny Detail – 98.40%
manao ny marina – 96.99%
fahaleovan-tena – 90.65%
famoronana – 79.13%
mieritreritra – 92.60%